တရုတ်အကြီးစား acrylic ပြွန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Kingsign acrylic
ကြီးမားသော acrylic ပြွန်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: acrylic ပြွန်
ကုန်ကြမ်း: မစ်ဆူဘီရှီ၏ 100% ကညာ
MOQ: 1 အပိုင်းအစ
ကုန်ကြမ်း: မစ်ဆူဘီရှီ၏ 100% ကညာ;
အရှည်: stander များအတွက် 2000mm လည်းထုံးစံကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်;
အရောင်: Transparent (90% င့်လင်းမြင်သာ);
1000-2000mm သွန်းပြွန်: အချင်းတော့ပါ။ အခြားမည်သည့်အချင်းတောင်းဆိုမှုကိုစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်;
အရည်အသွေး: ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြွန်အဆိုပါ PVHO စမ်းသပ် pass ကိုအသုံးပြုပါ။
"နှစ်တွေကုမ္ပဏီ, acrylic ပေါ်လီမာထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် ACR ထုတ်ကုန်များရှာဖွေရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်များနှင့် acrylic စူပါထူ (သတ္တုများပုံသွန်း) လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် 300 မီလီမီတာမှ 20 မီလီမီတာကနေလုပ်ငန်းစဉ်သည်အချက်အလက်များကိုစုစည်းထားပါတယ် တဦးတည်းကစျေးကွက်အခြေအနေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။
ကုမ္ပဏီရေကူးကန်နှင့်ရှုခင်းအင်ဂျင်နီယာရေကူး, ငါးမွေးကန်အတွက်စေ့စပ်ပြီးနောက်ကြောင့်လွတ်လပ်စွာအရှင်အသစ်တစ်ခုအဆင့်အထိထုတ်ကုန်တွန်းအားပေး, ပန်းကန်ဘွန်းမှလျှောက်ထားခဲ့ကြရာ acrylic ကော်, စူပါထူပြားများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အသစ်ဖန်တီးချောမွေ့စွာ splicing acrylic ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, High-မြင့်ရေကူးကန် (ပွင့်လင်း), နှင့်မြို့ပတ်ရထားများနှင့်ကို arc-shaped ချုပ်ရိုး၏ splicing အတွက်တတ်ကျွမ်း, စူပါထူပြား၏ docking ။ 2017 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ 800 မီလီမီတာမှ 150 မီလီမီတာ၏ super-ထူစူပါထူလိုင်းကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။ ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလမ်းကြောင်းမှတဆင့်နည်းပညာညွှန်ကြားချက်ပိုင်ရှင်များနှင့်ဒီဇိုင်နာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း။ အဆိုပါ kingsign အဖွဲ့သည်၎င်း၏တာဝန်အဖြစ်ဖောက်သည်ရဲ့အိပ်မက်ယူနှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်: အားလုံး acrylic စာရွက်မျိုး, acrylic င်းဒိုး acrylic ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, acrylic အဏ္ဏဝါခန်းမ, acrylic ငါးမွေးကန်, acrylic ရေကူးကန်, acrylic ငါးအကြံပေးအဖွဲ့, acrylic Semi-ချောအပြောင်းအလဲနဲ့အစိတ်အပိုင်းများ, acrylic Bond acrylic ကော်, ကွေး acrylic စာရွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာပိုင်းစွမ်းရည်: အပိုထူနဲ့ကြီးမားတဲ့ acrylic စာရွက်, မူရင်းချောမွေ့စွာ splicing နည်းပညာ, အပိုထူပန်းကန် superposition ဖြစ်လာတယ်နည်းပညာ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသတင်းစကားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့လိုလျှင်အောက်ပါ form မှာဖြည့်ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါအောက်ပါအတိုင်းသင်တို့သည်ငါတို့၏ရောင်းအား GM က Jenny ဆက်သွယ်နိုင်သည် provided.Or,
+ 86-13370070913 (Whatsapp)
wanqin4321 (Skype ကို)
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ 24 နာရီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှာ
ယခင်: ပျံ့ acrylic ပြွန်
နောက်တစ်ခု: ရှင်းရှင်းလင်းလင်း acrylic လှံတံ
100mm အကြီးစားအချင်း acrylic Tube
Clear ကိုအကြီးစားအချင်း acrylic Tube
အကြီးစားအချင်း acrylic Tube ဖော်ပြ
အကြီးစားအချင်း acrylic Tube
Aquarium များအတွက်ကြီးမားသောအချင်း acrylic Tube
အကြီးစားအချင်းအားရှင်းလင်းရန် acrylic Tube
အလင်းလမ်းပြ acrylic ပြွန်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း acrylic ပြွန်
ပျံ့ acrylic ပြွန်
အရောင် acrylic ပြွန်
အစိုင်အခဲကိုရှင်းလင်းရန် acrylic လှံတံ, Clear ကိုက Round acrylic လှံတံ, အကြီးစား acrylic Tube, ပလတ်စတစ်က Round Tube , Black Acrylic Rod, acrylic လမ်းညွှန်ချောင်းတွေ ,